Infographics: Ime QR Koodu nyocha | Martech Zone
Ndị enyi m maara na abụghị m onye na-akwado koodu QR (Ngwa ngwa). Oge m hụrụ koodu QR, chọpụta ma achọrọ m i scanomi ya, mepee ekwentị m, mepee ngwa ahụ iji nyochaa koodu ahụ… ma lelee ya - enwere m ike ịdebanye adreesị weebụ na. Echekwara m na ha jọrọ njọ ... ee, m kwuru ya!
Ọ na-egosi na nkuchi QR is nnọọ ihe ịma aka. 58% nke ndị nyochara ahụ amachaghị koodu QR. 25% nke ndị ahụ nyochara amaghị ọbụna ihe ha bụ! Na ịgbachitere koodu QR, ọ bụghị akụkọ ọjọọ niile. Ndị mmadụ ga-eji koodu QR mgbe ha na-atụ anya mbelata ego na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-eji ha eme ihe iji weghachite data.
Ihe atụ ole na ole m hụrụ nke m chere na ọ bụ ezigbo iji koodu QR:
N'ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ na Atlanta, menu jiri koodu QR mee ihe maka onye na-agụ ya ka ọ chọọ ihe ọmụma ndị ọzọ na-edozi ahụ karịa menu ịntanetị.
Na ogbako Webtrends, e guzobere kamera n'oge nnọkọ ọ bụla iji jide ozi baajị nke ndị ọbịa. Nke a mere ka ndị otu ahụ mata oge nnọkọ kachasị ewu ewu.
Izipu Kupọns site na email na ndị nnata. Otú ọ dị, akara ngosi na-arụ ọrụ dịka koodu QR. Ihe nyocha nke barcode juputara na ulo ahia.
Kedu ihe mmejupụta bara uru ị hụrụ maka iji koodu QR?
Echere m na anyị nọ na njedebe nke iji teknụzụ nyocha na nyocha dị elu karịa koodu QR.
Ọgọstụ 8, 2011 na 6:28 ehihie
M blọgụ gbasara koodu QR laa azụ na Disemba nke afọ 2010 ( http://kremer.com/qr-codes-link-brick-and-mortar-to-online ) na ebe a bụ ụfọdụ aro m….
Facebook dị n'ime ụlọ ahịa dị ka: "Ọnụ ụtọ ịzụ ahịa ebe a? 'Dị ka anyị' na Facebook. Jiri ekwentị mkpanaaka gị nyochaa koodu QR a. Bụrụ onye mbụ na-enweta nnukwu onyinye na mbelata site na ibe Facebook anyị. "
N'ụlọ ahịa Debanye aha maka akwụkwọ akụkọ ozi-e ma ọ bụ ọkwa ederede SMS. Otu echiche dị ka n'elu. Jide n'aka na ị ga-enye ụgwọ ọrụ maka ịbanye. Jide n'aka na ibe akwụkwọ akụkọ koodu QR bụ enyi na enyi mkpanaka.
Na ụlọ ahịa igwe mmadụ ma ọ bụ ozi nyocha: "Gwa anyị ntakịrị gbasara onwe gị wee nweta Kupọns n'efu". Nwee obere akwụkwọ nyocha enyi na enyi na ibe ya na ibe ikpeazụ ịbụ coupon na-echekwa ha nwere ike iji ugbu a.
Mgbasa ozi ndị e biri ebi, broshọ, kaadị azụmahịa: “Nweta ozi ndị ọzọ na nke a. Lelee koodu QR a na ekwentị mkpanaaka gị." Koodu QR dị ọhụrụ, mana ọtụtụ mgbasa ozi ebipụtara nwere oge izizi nke ọnwa. Gwa onye ahịa gị gbasara ihe atụmatụ mbipụta ha bụ maka ugbu a yana ọnwa isii site ugbu a.
Na-eche echiche gafere ụwa mkpọsa. Mụ na ndị ahịa ahịa na ihe ngosi kwurịtara n'oge na-adịbeghị anya n'otu nnukwu ụlọ ngosi ihe mgbe ochie. M tụrụ aro ka ha tinye koodu QR na mpaghara ngosi ụfọdụ. Koodu ahụ nwere ike ijikọ na ibe Weebụ nke ha na ihe egosiri, ma ọ bụ jikọta na isi Weebụ dị na mpụga.